Soisa mahafinaritra " Journey-Assist - fitsangatsanganana, Fiantsenana, toetr'andro
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Soisa
14 Mey 2020
Mivory! Ny perla any Eropa dia Soisa!
Suisse dia firenena manana natiora mahatalanjona, panorama mahafinaritra, tendrombohitra ary farihy. Noho ny fiononana, fahadiovana ary fanasoavana ny mponina dia mahatsiaro ho mahazo aina araka izany ny mpizahatany eto.
Ny toetoetran'i Soisa dia tsy hamela olona tsy hiraharaha!
Inona no atao any Soisa?
Ity firenena ity ho an'ny vahiny dia misy karazana kilasy marobe. Mora ho an'ny tsirairay ny mahita izay mifanaraka aminy.
Ny làlamby fiaran-dalamby indrindra no misy any Switzerland!
Afaka maka lamasinina tendrombohitra ianao ary tonga eo an-tampon'ilay tampony Jungfraujochmahafinaritra ny tontolon'ny panorama tsy hay hadino avy any amin'ny haavon'ny 2865m.
Panoramas an'ny Switzerland
Jungfraujoch - ny zotra fizahantany tsara tarehy indrindra any Eropa
Fiaran-dalamby any Switzerland
Lamasinina sôkôla any Suisse (lamasinina sôkôla Swiss)
Ary koa, ohatra, eto dia afaka mandeha mitaingina ny distrikan'i Gruyeres ianao amin'ny "sôkôla "lamasinina. Ny fiaran-dalamby dia azo antoka fa tsy sôkôla, fa manaraka ny fizahan-tany manokana kosa izy Mountreux - Gruyères - Broc., Manaraka izany dia afaka mahita ny hatsaran-tarehy rehetra amin'ny toetra Swiss.
Lamasinina Chocoland tany Suisse
Ilay keso Swiss malaza!
Malaza eo amin'ireo mpizahatany gourmet no fahafahana miditra ao amin'ny iray amin'ireo mpanamory ny fromazy manerantany ary mijery amin'ny masonao ny fanomanana ny fromazy, azonao atao ny manandrana avy eo.
Misy ihany koa ny fanandramana hanandrana ilay fondue malaza, dia fromazy iray andrahoina amin'ny divay fotsy ary aroso anaty vilany mafana mafana.
Ny kesika Swiss malaza
Ny karazana fitsangatsanganana rehetra any Soisa
Azo alaina amin'ny fitsidihana ihany koa ny lapan'ny Firenena Mikambana amin'ny famantaran'ny Soisa malaza atao hoe Zenith, Tissot sy ny hafa, ny loharano Geneva, ny tetezana hazo Kapelbrücke, ny Rhine Falls (ny lehibe indrindra any Eropa!) Ary maro kokoa!
Lapan'ny Firenena Mikambana any Genève
Ny orinasa mpiambina ny Soisa malaza, Zenith
Ilay loharano je-do manirery ao Genève
Tetezana hazo Chapel tetezana Kapelbrücke
Rhine Falls any Soisa
Ny fialantsasatra mavitrika any Soisa
Tombony lehibe iray any Suisse ny fandaminana mety amin'ny safidy fialam-boly mavitrika. Amin'ny fahavaratra, ny faritra be tendrombohitra amin'ny firenena dia mety amin'ny mpankafy bisikileta sy fitsangantsangana.
Làlana manan-tantara avy any Sion ka hatrany Zermatt
Betsaka ny lalana misy izay voaomana tsara sy hatsaraina tsy tapaka. Ny mpizaha tany izay mitady fialan-tsasatra fialan-tsasatra hafa dia afaka miala sasatra ao amin'ny dobo sy ny thalassotherapy session izay atao amin'ny loharano mafana, toa ny Villars, Leukerbad ary Yverdon.
Loharano hafanana mahatalanjona ao Suisse loharano loharano mahatalanjona any Suisse
Ny toby Soisa ho an'ny ankizy avy amin'ny firenena rehetra dia be mpitia, izay ahafahan'ny zazakely miala sasatra, manangona hery, manandrana ary manao namana avy any ivelany.
Tsy tokony hohadinointsika ny momba ny resa-pandroana an'ny Soisa, malaza eran'izao tontolo izao!
Toetany any Soisa
Firenena manana toetrandro kontinanta antonony i Soisa. Na izany aza, ny toe-tany eo an-toerana dia misy fiantraikany amin'ny hoe saika ny 60 isan-jaton'ny faritr'i Soisa dia be tendrombohitra. Misaotra an'io, afaka adiny 2 fotsiny dia afaka mandeha ianao manomboka amin'ny fahavaratra ka hatramin'ny ririnina na ny mifamadika amin'izany.
Ny Alps dia mijanona ho sakana manakana ny fihetsiketsehana mianatsimo amin'ny rivotra Arctic mangatsiaka, na dia tsy mandalo rivotra mafana any amin'ny avaratra aza izy.
Ao amin'ny kantona avaratra, ny ririnina dia malefaka ary maharitra 3 volana (Desambra-febroary). Mandritra io fotoana io, ny maripana ambany indrindra dia eo amin'ny -1 ka hatramin'ny -4, ary ny ambony indrindra dia avy amin'ny +2 ka hatramin'ny 5. Amin'ny vanin-taona fahavaratra (manomboka amin'ny volana Jona, mifarana amin'ny Aogositra) amin'ny alina ny maripana dia eo anelanelan'ny +11 hatramin'ny +13, ny tolakandro - hatramin'ny +22 ka hatramin'ny 25. Betsaka ny rotsakorana any Suisse mandritra ny taona. Ny ankamaroan'izy ireo dia lavo amin'ny fahavaratra, kely indrindra - amin'ny Janoary-martsa.
Any amin'ny faritra atsimon'i Soisa amin'ny ririnina dia saika mitovy ny mari-pana sy ny avaratra, fa amin'ny fahavaratra kosa dia avo kokoa. Amin'ny salan'isa, ny maripana ambany indrindra dia avy amin'ny +13 ka hatramin'ny +16, ary ny ambony indrindra dia avy amin'ny +26 ka hatramin'ny 28. Ny oram-baratra any atsimo Soisa dia avo kokoa noho ny any avaratra.
Any amin'ny faritra be tendrombohitra dia mamaritra ny haavon'ny toerana iva. Betsaka ny lanezy eny amin'ny havoana amin'ny ririnina. Ny mari-pana mandritra ny ankamaroan'ny taona (manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Mey) dia ambanin'ny zero amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro. Amin'ny volana mangatsiaka indrindra (Janoary sy Febroary) amin'ny alina dia mihena ny maripana hatramin'ny -10 hatramin'ny -15, ary mandritra ny andro - hatramin'ny haavon'ny -5 ka hatramin'ny -10. Ny volana mafana indrindra dia ny volana Jolay sy Aogositra (avy amin'ny +2 ka hatramin'ny +7 5 alina, ary ny +10 ka hatramin'ny + 1 amin'ny andro). Ny halalin'ny ranomandry avo indrindra dia matetika amin'ny taona XNUMX aprily of aprily.
Weather in Switzerland ankehitriny + forecast
Vola any Suisse - Franc Swiss
Ny vola Soisa no franc Soisa. Manana ny sata mifehy ny volam-pirenena amin'ny Principality of Liechtenstein ihany koa izany. 1 franc dia zaraina ho 100 rappens. Amin'izao fotoana izao, ny volafotsy misy antokona 10, 20, 50, 100, 200 ary 1 000 francs dia ampiasaina, ary koa ny vola madinika miaraka amin'ny antontaly 5, 10, 20 rappen ary 1/2, 1, 2 ary 5 francs.
Rappens - farantsak'i Suisse
Converter - kajy vola miaraka amin'ny tahan'ny Franc Swiss vaovao farany izao
Fiantsenana any Soisa
Manoloana ny fisiany tany amin'ireo firenena eoropeana mpifanolo-bodirindrina, toa an'i Alemana, Frantsa ary Italia, Swiss dia manome fotoana kely kokoa ny fivarotana, satria vitsy ny toeram-pivarotana ary tsy misy ny fihenan'ny vidiny amin'ny faran'ny vanim-potoana.
Noho izany, ny fiantsenana ao Soisa dia manana toetra tena fanta-daza, toy ny, isaky ny lehibe, amin'ny ankapobeny, ny zava-drehetra eto amin'ity firenena ity. Ny haavon'ny vidiny eto dia mihoatra ny salan'isa eoropeana, fa amina ampahany amin'ny kalitao avo indrindra amin'ny vidin'ny entana rehetra izany, manomboka amin'ny mpanamontsin-bozaka ary miafara amin'ny satroka silk.
Ny famantaranandro Soisa dia fantatra eran'izao tontolo izao noho ny fahatokisan'izy ireo
Ny famantaranandro dia karatra fitsidihan'i Soisa ary maneho ny fahamendrehana. Ireo marika manokana amin'ny fanamboarana famantaranandro dia misolo tena betsaka eto. Ny malaza indrindra dia ny Rolex, Omega, Tissot, Breguet, sns. Ary koa, ny fanaovana hosoka amin'ny famantaranandro eto amin'ity firenena ity dia saika tsy azo atao mihitsy. Rehefa dinihina tokoa, ny famantaranandro Soisa no tena endrik'i Soisa; ireo mpanamboatra sy mpivarotra azy rehetra dia iharan'ny fanaraha-maso henjana indrindra.
Mijery soisa ny TissotSwiss dia mijery an'i Tissot
Nanao makiazy i Soisa
Ny akora vita amin'ny soisa dia tena lafo vidy, fa ny vidiny dia miovaova amin'ny kalitao. Ny laboratoara eo an-toerana dia mamorona tsipika tena mahomby. Ny kalitao ambony indrindra dia vokatra vita amin'ny kosmetika ho an'ny olon-dehibe. Na dia eto amin'ity firenena ity aza dia manao andiany tsara indrindra ho an'ny manicure, izay azo antsoina hoe saika mandrakizay.
Ny fromazy any Suisse dia ny endrik'ity firenena ity izay mitovy amin'ny famantaranandro Soisa. Amidy na aiza na aiza eto ny fromazy manara-penitra, fa tsara kokoa ny mitady karazana tany am-boalohany any amin'ny fivarotana fromazy manokana izay misy isaky ny tanàna.
Sakafo ao Suisse
Ny fahandro any Swiss dia tsy vitan'ny hoe mahavariana. Ny vokatra tsotra dia malaza eto. Saingy ny lovia sasany dia miavaka amin'ny fitambaran-tsakafo hafangaro.
Lovia any Swiss izay misy:
Nisy tsikera manokana natao tao amin'ny canton of Graubünden
Sitrana tsara amin'ny laoniny
Tsara homarihina ihany koa ny Rösti - lovia vita amin'ny ovy misy bacon, legioma na fromage Appenzel, indrindra any Zurich.
Triggel cookies dia tsindrin-tsakafo nentim-paharazana ho an'ny Krismasy. Endasina amin'ny endriny maro karazana izy. Aorian'ny fanaovan-tsakafo, fotsy ny iray amin'ny sisiny, volamena ny iray. Ny fitambarana dia misy tantely sy zava-manitra.
Ny lasopy lafarinina melzuppe dia vita indrindra amin'ny lafarinina na lafarinina, tsy dia matetika avy amin'ny lafarinina katsaka (cantons miteny frantsay matetika). Ny fomba fahandro koa dia misy sira, ronono, bacon, zava-manitra, anana ary ron-kena. Ity lasopy ity dia malaza amin'ny andro fifadian-kanina.
Ny sakafo mafana any Soisa dia tena mendrika ny hisarika ny gourmets. Toerana malaza indrindra i Suisse fitsangatsanganana gastronomic!
Fomba fitantanan'ny governemanta: Repoblika federaly
Fiteny: Alemanina. Italiana. Frantsay. Romanshsky.
Kaody finday: 41 +
Sandam-bola: Swiss franc (CHF)
Sehatra Internet: ch, .swiss